Nomad Green: Fifaninanana lahatsoratra famakafakana mikasika ny fahalotoan’ny rivotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2020 14:28 GMT
Mankahery ireo olontsotra mpanao gazety mba hanao tatitra mikasika ny fahasimban'ny tontolo iainana any amin'ny fireneny ny Nomad Green, ilay nahazo famatsiana avy tamin'ny Rising Voices tao Mongolia.
Maro ireo olana ara-tontolo iainana ao Mongolia. Mametraka olana goavana ireo voka-dratsin'ny fiovan'ny toetrandro toy ny fiovan-ko tany efitra sy ireo toe-javatra vokatry ny olombelona toa ireo renirano voaloto noho ny fako avy amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany sy ny fahalotoan'ny rivotra. Araka ny tatitra vao haingana navoakan’ny UNEP izay mitondra ny lohateny hoe “Faharefoan'ny Rano An-drenivohitra mankany amin'ny fiovan'ny toetrandro ao Mongolia”:
Mihamatetika ireo maripàna ambony be sy ireo loza voajanahary toy ny haintany, tondradrano sy firotsahana oram-panala mavesatra, ary nitombo 2.1° Celsius ny salan'ny maripàna isantaona nanomboka tamin'ny 1940. [..] Nanolo-kevitra ireo planina ara-toetrandro tamin'izany fanadihadiana izany fa tsy maintsy hizatra amin'ny tsy fahampian-drano bebe kokoa amin'ny hoavy ilay firenena.
Otgonsuren Jargal tany amin'ny atrikasa iray ho an'ireo mpanao gazety miandraikitra ny tontolo iainana, avy amin'ny Nomad Green any Ulaanbaatar. Sary natolotry ny Nomad Green.
Anatin'izao toe-javatra izao, miatrika fanamby henjana ireo Mongoliana mpikatroka ho an'ny tontolo iainana. Mitatitra i Otgonsuren Jargal, lehiben'ny mpanonta lahatsoratra ao amin'ny Nomad Green fa:
Manohy ny tolona ataony ireo Mongoliana maitso. Nankany amin'ny fitsarana ny sasany tamin'izy ireo androany. Miady amin'ny asa fitrandrahana izay manimba ny tany ary mahatonga ny fanjavonan'ireo renirano maro any Mongolia ny olona. Tsy afaka ny hahandry tantana ireo Mongoliana maitso raha toa ka toy ny loharanon-karena fotsiny ihany no fahitàn'ireo mpanao politika sy mpandraharaha manerantany an'i Mongolia, ary lasa taratasy izay hamolavolan'izy ireo ny drafitr'orinasany fotsiny ny sarintanin'i Mongolia.
Mamoaka ilay tantara ao amin'ny Conscious Being i Keith Herman Snow:
Tany am-piandohan'ny Septambra 2010, nitifitra fitaovana fitrandrahana volamena anà orinasa roa vahiny mpitrandraka harena ankibon'ny tany, izay tsy miasa ara-dalàna any avaratr'i Mongolia, ny vondrona olontsotra Mongoliana kely iray izay nitàna basy fihazàna. Iray tamin'ireo mpikatroka efatra nitam-piadiana ireo i Tsetsegee Munkhbayar, nahazo ny loka Goldman Environmental tamin'ny 2007 — ny ‘Nobel Maitso’ — atolotra isantaona ho an'ireo mpikirakira ny tontolo iainana mijoro maneran-tany. [..]
Ankehitriny, ireo vahiny izay nanaiky azy ho toy ny mahery fo iany no nanameloka sy mandà azy. Tantara mikasika ny famonoana ny tany, famonoana ny marina, famonoana ny fanantenana — ary famonoana ny làlan'ilay nomady izany.
Manoratra bebe kokoa i Otgoo :
Raha toa ka misy manome tsiny anay amin'ny “fitifirana dianà bildozera”, tsy misy hetsika tokony hankahalaina izany. Zavatra tena kely no nataonay. Tsy misy maharatsy an'izany satria tsy hanenina izahay na dia hamoy ny ainay eo am-pitolomana aza. [..]
Tsy miraharaha io olana io ny governemanta. Noho izany, manao hetsika santatra izahay ary hikarakara ity hetsika ity. Raha toa ka tsy takatr'izy ireo izany, hotohizanay hatrany amin'ny farany.
Mitatitra i Erdenebayar T, mpikambana ao amin'ny Nomad Green, fa natomboka tamin'ny 01 Janoary 2011 ny fifaninanana fanoratana lahatsoratra famakafakana mba hanomezana valisoa ireo olontsotra mpanao gazety sy mpandray anjara mendrika izany.
Tao anatin'ireo volana roa voalohany, dimy no isan'ireo mpandresy tamin'ilay fifaninanana fanoratana lahatsoratra famakafakàna izay nitondra ny lohahevitra hoe – ‘Fahalotoan'ny rivotra’.
Tomponandraikitra amin'ny 60%-n'ny fahalotoan'ny rivotra ao amin'ny tanàna ireo trano nentim-paharazana any Ulaanbaatar, Mongolia, mandritra ireo volana maro hisian'ny ririnina. Sary avy amin'i Andrew Cullen. fizakàmanana Demotix.
Ireto avy ireo mpandresy:
‘Fahalotoan'ny rivotra – Fahavalontsika’ D.Monkh-Erdene mpianatra ao amin'ny lisea voalohany ao amin'ny distrikan'i Sukhbaatar
‘Na tsy afaka handray fanapahankevitra momba ny olana entin'ny fahalotoan'ny rivotra aza ny ankizy, afaka tsy manary fako na aiza na aiza izy ireo’ O.Lkhagvadulam mpianatra ao amin'ny lisea laboratoara voalohany ao amin'ny distrikan'i Sukhbaatar
‘Ndao hanome rivotra ara-tsosialy mahasalama sy mangatsiatsiaka ho an'ireo tanorantsika’ B.Uuganbayr mpianatra faha-4 ao amin'ny Oniversitem-panjakan'i Mongolia
‘Tsy mora ny miala amin'ny fahalotoan'ny rivotra’ (traikefa japoney) G. Dovchindorj mpampianatra “Etugen” oniversite
Mifoka karibaona sa rivotra isika?’ G.Tegshjargal mpanonta lahatsoratra ao amin'ny tobin'ny TV8
Atrikasa iray an'ny Nomad Green. Sary avy amin'ny Nomad Green
Vakio ny Bliaogin'ny Nomad Green (amin'ny tenim-pirenena enina) mba hahazoanao vaovao bebe kokoa mikasika ny raho-mitatao amin'ny tontolo iainana any Mongolia.